Hoggantuun IOM< Moowuriin Achi’engi hojii dhaabannii boqonaa bulchiinsaa akka bahan kan taasifaamee dhimaa haala Tgiraay keessa jirun walqabatee yaada qajeelfama IOMn ala kennan jedhamuuni.
Dhaabbanii Mootummaaota Itiyoophiyaatti itti gaafatamtuu dhaabata dhimmaa baqattootaa adduunyaa gaafiifi deebii hin eeyyamamne taasisaniiru jechuudhaan ojii akka dhaaban taasisamuu isaa gabaasinii AFP ibseeraa.
Akka gabaasichii Jedheetti, nammi Moowuriin Achi’engi jedhaman hojii dhaabannii boqonaa bulchiinsaa akka bahan kan taasifaamee dhimaa haalaa Tgiraay keessa jirun walqabatee yaada qajeelfama IOMn ala kennaniin haanga’ootaa mootumoota gamtoomanii qeequu isaaniitiif jedhameeraa.
Moowuriin Achi’eng torban darbe gaafii fi deebii nama Jeef Persi jedhamuu, nama dhimmaa Tigraay irrati Mootumaa Itiyoophiyaa degeree waan hedduu bareesaa jiruu wajjin taasifete keessatti haaga’oonni Mootumootaa gamtoomanii warren TPLFn deggaranu gara moggaatti na dhiibaa jiru jechuu ishetiif akka ta’e gabaasameera.
Afrikaa bahaa fi gaanfaa Afrikaatti daarekteera IOM kan ta’an Mohaammed Abdiikeer akka AFPti himanitti gaafii fi deebiin Moowuriin taasisan dudhaa fi qajeelfama amala gaarii dhaabichaa wajjin kan wal hinsimanneedha jedhaniiru.